महाभारतमा सकुन्तलाको औंठी हराएपछिको अवस्थामा जस्तै छ कांग्रेस - हिमाल दैनिक
महाभारतमा सकुन्तलाको औंठी हराएपछिको अवस्थामा जस्तै छ कांग्रेस
१२ जेष्ठ २०७६, आईतवार १३:०९
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान आएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तर, यति छोटो समयमै गणतन्त्रको भविश्यका बारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मुख्यतयाः वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारी गतिविधिले यसमा आशंका बढिरहेको छ।
हालै मात्र मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको माध्यमबाट सञ्चार जगतलाई नियन्त्रण गर्ने कोशिश भएको छ। संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी मान्यता विपरित आएको मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकले अर्को विवाद खडा गरेको छ।
यसले अरू सबै विचार गौण हुन्, जे हो केबल मार्क्सवाद मात्र सही भन्ने चिन्तन राख्ने कम्युनिष्ट नेतृत्वले जानी बुझी यी गतिविधि गरेको त होइन भनि नेपाली समाजलाई सशंकित बनाएको छ। तर, आशंकाको यो मात्र एउटा कारण छैन।
पत्रकार नेपाली समाजको अत्यन्त महन्वपूर्ण अंग हो। उपर्युक्त कदमबाट पत्रकार प्रभावित होलन्। पत्रकार प्रभावित भएपछि देशको सूचना प्रवाह समाप्त होला। सूचना समाप्त भएपछि के हुन्छ?
सोभियत युनियनको पतनको मुख्य कारणको पराकाष्टा त्यहाँ सूचना र जानकारीको अभाव थियो। त्यो कुरा आज सर्वमान्य छ। सूचनाको अभावले नेपाल संकटमा पर्नेछ। यो दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा हो।
यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा अर्को छ। ठूलो जाँगर, उत्साह, कल्पना लिएर नेपालमा जनआन्दोलन भएको हो। अब नेपालका सबै समस्याहरु हल हुन्छन् भनि बारम्बार नेपालका महान नेताहरु किसुनजी, गिरिजाबाबुदेखि शेरबहादरजीले भन्नुभएको थियोः अब नेपाली जनताले प्रजातन्त्रका लागि फेरि संघर्ष गर्नुपर्दैन।
तर, प्रजातन्त्रका लागि फेरि पनि नेपाली जनताले संघर्ष गर्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था आएको छ। यो किन आएको छ? यसबारे गम्भीर भएर विचार विमर्श गर्नुपरेको छ।
सञ्चार क्रान्तिको अभूतपूर्व प्रसारपछि नेपालमात्र होइन, अनेकन देशमा सत्ता पलट भएको छ। मध्यएशियामा भएको सत्तापलट हिँजो अस्ति मात्रै भएको हो। तर, सत्तापलट भएकै भोलिपल्ट मध्यएशिया सूचारु रुपले सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रताको बाटोमा जान सकेन।
अन्यत्र पनि धेरै ठाउँमा आधुनिक युगमा क्रान्ति भएका छन्। अरु त अरु विश्वकै सशक्त मुलुक भनिएको सोभियत युनियनले साम्यवादलाई त फ्याँक्यो तर, साम्यवादलाई फ्याँकीसकेपछि के सोभियत युनियन जस्ता पूर्वी यूरोपका देशहरुमा साँचो अर्थमा सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रता स्थापित भयो? त्यो पनि भएको देखिँदैन।
त्यहाँ के देखिन्छ भने, उपभोक्तावादले गाँजेको छ। बेलगाम र अनियन्त्रित उपभोक्तावादको सँगसँगै हिंसा, द्धेस, कलह, गुण्डागर्दी, अपराध र भ्रष्टाचारले आक्रान्त बनेका छ।
रूस आज धेरै स्वस्थ देश छैन। त्यसका शासक भ्लादिमिर पुटिनलाई जसले जे भने पनि प्रजातान्त्रिक विचार र आस्थाको सवालमा धेरै नम्बर दिन सकिदैन। त्यहाँ भित्रको अपराधको दर अत्यन्त ज्यादा छ, भ्रष्टाचार पनि ज्यादा छ।
एउटा व्यवस्था फ्याँक्न सजिलो हुन्छ तर, त्यो व्यवस्थालाई फ्याँकेर त्यसको विकल्पमा कस्तो व्यवस्था ल्याउने भन्नेबारे स्पष्ट तस्विर आवश्यक हुन्छ। नेपालमा गणतन्त्र आयो, राजाको व्यथिती, मनपरी तन्त्रले गर्दा हामीले सरक्क राजालाई फ्याक्यौं।
राजा ज्ञानेन्द्रका उपर राजा विरेन्द्रको वंशनाशको आरोप पनि थियो। उनी शंकाको घेरामा थिए, सिंगो परिवार अलोकप्रिय थियो। गणतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्दा त्यस्तै भावनाको नारा नै थियो।
त्यसकारण आम जनतामा राजसंस्थाप्रतिको घृणाको भावना उत्पन्न भयो र नेपालमा परिवर्तन आयो। तर, के त्यो परिवर्तनको रुपरेखा हामीसँग छ? छ भने त्यो के हो?
अहिले विश्वमा यस्तो बुझिन्छ कि, परिवर्तनको एउटैमात्र रुप हामीसँग छ त्यो रुपरेखा भनेको नवउदारवाद हो अथवा पूँजीवाद हो अथवा भुमण्डलीकरण हो।
स्मरणीय छ, नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बी.पी. कोइरालाले आफनो जीवनको आखिर वर्षहरुमा यस किसिमका नवउदारवादी र उपभोक्तावादी प्रवृत्तिको कडा विरोध गर्नुभएको थियो। बी.पी.को समाजवादको अवधारणा स्पष्ट थियो। उहाँ एकातिर मार्क्र्सको विश्लेषणसँग सहमत हुनुहुन्थ्यो भने अर्कोतर्फ गान्धीको जीवनशैलीबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो।
त्यसैले उहाँले नेपालले आज उपभोक्तावादका पछाडि अन्धो दौडमा लाग्नु हुँदैन भन्नु भयो। नेपाली कांग्रेसले आफूलाई चिन्नुपर्दछ। कांग्रेस सुकिला मुकिला र टाठा, बाठाको पार्टी होइन। यो गाउँमा बसोबास गरिरहेका लाखौँ विपन्न र गरिब कार्यकर्ताको पार्टी हो।
यो अवश्य हो उनीहरुलाई एकसरो राम्रो लगाउनु परेको छ, दुई छाक मिठो खानु परेको छ, छोरा छोरीलाई राम्रो शिक्षा दिनु परेको छ, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधा दिनु परेको छ। तर, छोराछोरीको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि उनीहरु हाम्रो समाज र संस्कृतिलाई विर्सिएर, मानवीय मूल्यलाई विर्सिएर तथाकथित रेल र पानीजहाजको सपनामा रंगमगाउनु हुँदैन।
हामीले नेपाली समाजलाई नेपालको जलवायु, वातावरण, प्राकृतिक सन्तुलनकासाथ अगाडि बढाउनुपरेको छ। संक्षेपमा भन्ने हो भने, गाई एउटा प्रतिक हो। हामीले गाईमुखी/ग्राममुखी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु परेको छ।
झण्डै ७० प्रतिशत किसान भएको देशमा उनीहरुलाई विर्सिएर विदेशको अन्धानुकरण गरी नेपाललाई सिंगापुर, स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने सकिँदैन।
नेपालले नेपाली भएरै सुखी हुनु परेको छ। यो भन्नुको मतलब नेपालीले दुःख खेपरै बस्नुपर्छ भन्ने होइन। अलिकति मात्र पनि हामीले बुद्धि पुर्‍याउने हो भने ठिक किसिमको योजना, सिँचाई पद्धती बनाएर कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने हो भने नेपालको वर्तमान समस्या समाप्त हुन सक्छ।
मुख्यतयः हामीले ध्यान कृषि क्षेत्रको विकासलाई नै दिनु परेको छ। कृषिमा नै सबैभन्दा बढी जनसंख्या निर्भर रहेको कारण यसलाई ध्यान दिनु परेको होइन, कृषि एउटा जीवनशैली हो। प्राचिनकालदेखि हाम्रा परम्परामा एउटा कुरा भन्ने गरिन्छ, धेरै पैसा कमाउने भए व्यापार व्यवसायमा जाउ, सुशी जीवन विताउने भए गाउँमा बस। गाउँ एउटा सखी र शान्त जीवनको पर्याय हो।
विश्व आज एकातिर जाँदैछ। त्यो विश्व पेट्रोल, डिजेल र कोइलामा आधारित छ। डिजेल र पेट्रोलमा आधारित विश्वले नेपाल र भारत मात्र होइन, सिंगो पृथ्वी नामक ग्रहलाई दुःखी बनाएको छ।
पृथ्वीको तापक्रम निरन्तर बढ्दै छ। प्रत्येक वर्ष दुई सेन्टीग्रेडमात्रै बढ्न थाल्यो भने हाम्रो हिमालय अबको केहि वर्षमै पग्लिन्छ। नदीहरु विशाल बाढी आउँछ। बंगलादेशजस्ता मुलुक डुबेर जान्छ। प्रकृति बदलिन्छ, गर्मीको मौसममा ठण्डी र ठण्डीको मौसममा गर्मी हुन सक्छ। त्यसपछि पृथ्वी नास हुन्छ। हाम्रा पुराण र रामायणमा यस्तो परिस्थितिकोबारेमा परिकल्पना गरिएको छ।
‘नेपाली कांग्रेसको कर्तव्य छ, यसले बी.पी. कोइरालाको शिक्षा, किसुनजीको सादगी, गणेशमानजीको दृढशक्ति लिएर नेपाललाई चाहिने र सबैलाई पुगिसरी आउने, खान लाउन, शिक्षा, स्वास्थ्यको परिकल्पना गर्नुछ,’ यही हुने छ नेपाली कांग्रेसका जागरणको वास्तविक सन्देश।
महाभारतमा एउटा कथा आउँछः सकुन्तलको औँठी। सकुन्तलाको एउटा औँठी थियो। त्यो औँठी छउन्जेल उनलाई राजा दुश्यन्तले विर्सने कुरा थिएन। तर, संयोगवस एकदिन त्यो औँठी हरायो। ऋषिमुनीको उनले अपमान गरिन। फलस्वरुप ऐन मौकामा राजा दुश्यन्तले उनलाई चिनेन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, हामीले समाजवादको मर्म, हाम्रा संस्थापक नेताहरुले दिएको शिक्षा र इच्छा विर्सिएपछि सकुन्तलाको औँठी विर्सिएजस्तै भएको छ।
सकुन्तलाले औठी विर्सिएपछि उनलाई राजाले तिरस्कार गरेर हिँडे। हामीले पनि समाजवाद विर्सिएपछि हामीलाई सकस परेको छ। अरु केहि पनि होइन। यस जागरण अभियानका क्रममा हामीले गम्भीर भएर आफ्नो सिद्धान्त र समाजवादको मर्म खोज्न र बुझ्न सक्नुपर्छ।
कांग्रेस बाहेक अरुले नेपाललाई नेतृत्व दिन, शान्ति दिन र एकता दिन सक्दैन। त्यसका लागि अहिले कांग्रेसले गाउँ गाउँ जाने अभियान चलाएको छ। यो अत्यन्त स्वागतयोग्य र उत्साहप्रद अभियान छ।
हामीले गाउँ जाँदा हामीले जानेका छौँ, हामीले बुझेका छौँ त्यसैले हामी तिमीहरुलाई सिकाउन आएको भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। हामीले गाउँका सामान्य नागरिकसँग सिक्नु पर्दछ।
बी.पी. कोइरालाले केहि नपाएर किसानको उदाहरण दिएका होइनन्। उनले मुख्यतयः किसानलाई महत्व देउ भन्न खोजेका हुन्। आज हामीले यहि कार्यशैलीका आधारमा म जस्तो जान्ने कोही छैन, मैले मात्रै प्रजातन्त्रको परिभाषा बुझेको छु भनेर अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रीजको कुरा गरेर हुँदैन।
प्रजातन्त्रको परिभाषा त्यहि हो, प्रजादेखि सुरु हुन्छ। बडो सोचविचार गरिकन प्रजातन्त्रको सिद्धान्तमा राजाको पनि एक भोट र प्रजाको पनि एक भोट, प्रधानमन्त्रीको पनि एक भोट, चपरासीको पनि एक भोटको मान्यता राखिएको हो। तीन वटा विषयमा स्नाकोत्तर गर्नेवित्तिकै उसको धेरै भोट र निरक्षरको कम भोट भन्ने हुँदैन।
त्यसैले मनुष्यमा अन्तरनिहित रहेको सत्यको साक्षातकार गर्नु परेको छ। त्यो सत्य भनेको मनुष्यको अन्तरमनको सहजबुद्धि हो। कांग्रेसको यो गाउँ फर्किने अभियान साँचो अर्थमा गाउँ फर्काइ होस् र त्यसले नेपाली जनताको सहज भावनाको उद्घाटन गरोस्। र त्यसका आधारमा पार्टीलाई अगाडि चलाओस्। यसले आगामी आम चुनावमा मात्र होइन, नेपालको आगामी २५ वर्षको राजनीतिमा नेतृत्वबाट कांग्रेसलाई कसैले पनि विमुख र बञ्चित गर्न सक्ने छैन।
कांग्रेसका नेता तथा विश्लेषक प्रदिप गिरिका अन्य लेख रचना हेर्न तलका लिंक खाेल्नुहाेस्ः
जागरण अभियानः कांग्रेसमा नवजीवनको रक्तसंचारको प्रयास
कांग्रेसकाे जागरण अभियानमा ‘गब्बर’काे खाँचाे
बी.पी.का उत्तराधिकारीहरु धर्मको नाममा अलमलिनु हुँदैन
Prevपछिल्लोसंघीयता असफल पार्न सरकार नै लागिपरेको छः सिंह
अघिल्लोग्याँस सिलिण्डर विष्फोटन हुँदा सुकेधारामा २ अनामनगरमा एकको मृत्युNext